Fiarovana ny fari-dranomasina Handray ny andraikiny feno i Madagasikara
Firenena miisa 07 no niara-nanao sonia ireo fifanaraham-paritra roa mahakasika ny fandaharan’asa fitandroana ny fandriampahalemana an-dranomasina (Mase Programme) aty amin’ny faritry ny ranomasimbe indianina sy ny faritr’i Afrika atsinanana sy atsimo.
« Handray ny andraikiny feno i Madagasikara, eo amin’ny fiarovana ny tombontsoa stratejika sy ekonomika, ary amin’ny haha mafy orina ny fandriampahalemana aty amin’ny faritry ny Ranomasimbe Indianina », hoy ny praiminisitra, Ntsay Christian. Efa hatry ny ela ny governemantan’i Madagasikara no nametraka ho vaindohan-draharaha ny resaka fiarovana ny fari-dranomasina. Maro ireo loza mety hanambana satria tafiditra ao anaty faritra stratejika fivezivezena ny nosy, ary na eo aza ny mety ho zotram-pivoarana ho an’ny harem-pirenena dia maro koa ireo trangana fanondranana mety hiseho, hoy ihany izy. Ho fandrindrana ny asan’ny Tafika eo anivon’ireo sampandraharahaha voakasika dia tsy maintsy mampihatra politika vaovao mahakasika ny fiarovana ny sisin-tany i Madagasikara, izay mandravona ny fiaraha-miasa ho iray, ary efa miroso izany amin’izao fotoana izao. Tsy afaka misaratsaraka ny fomba fiasa ary haravona ho iray izany, mba hahafahana manana « gardes côtes » tena manao ny asany, ka hahitana ny avy amin’ny ladoany, ny tomponandraikitra avy amin’ny ministeran’ny jono sy avy amin’ny sehatra hafa.